Storm Glass - အဲဒါက ဘာအတွက်လဲ၊ ဘာအတွက်လဲ၊ ရာသီဥတုကို ဘယ်လို ခန့်မှန်းနိုင်မလဲ။ ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 11/11/2021 10:01 | ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း
လူသားသည် ရာသီဥတုကို မည်သို့ကြိုတင်ခန့်မှန်းရမည်ကို အမြဲသိချင်နေပါသည်။ ကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ ကြိုးစားဖန်တီးထားတဲ့ တီထွင်မှုတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ယောက်က မုန်တိုင်းဖန်. ၎င်းကို မုန်တိုင်းပုံဆောင်ခဲဟုလည်း လူသိများပြီး ၎င်းသည် ရာသီဥတုကို ခန့်မှန်းရန် အသုံးပြုသည့် စူးစမ်းလေ့လာသည့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ မိုးလေဝသဗေဒဝါသနာရှင်များကြားတွင်သာ သိကြသော်လည်း X ကို ၁၉ ရာစုတွင် ရေကြောင်းပြသူများ အသုံးပြုနေပြီဖြစ်သည်။
ဤဆောင်းပါးတွင် Storm Glass သည် မည်သည့်အရာ၊ ၎င်း၏ထူးခြားချက်များနှင့် အသုံးပြုပုံတို့ကို ပြောပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
1 Storm Glass ဆိုတာ ဘာလဲ။
2 ရာသီဥတုကို ဘယ်လို ခန့်မှန်းနိုင်မလဲ။
3 Storm Glass ကို တီထွင်သူ
5 Storm Glass ပြုလုပ်နည်း
Storm Glass ဆိုတာ ဘာလဲ။
ဤစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောကိရိယာသည် မတူညီသောအရည်များရောနှောထားသော အလုံပိတ်ဖန်ဘူးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အဆိုပါအရည်များသည် ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်၍ ပုံစံအမျိုးမျိုးယူနိုင်ပြီး ရာသီဥတုကို အချိန်တိုအတွင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ဤအရောအနှော၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ ၎င်းတို့သည် ပေါင်းခံရေနှင့် အီသနောဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပိုတက်စီယမ်နိုက်ထရိတ်၊ အမိုးနီယမ် ကလိုရိုက်နှင့် ပရုတ် ပမာဏ အနည်းငယ်လည်း ပါဝင်သည်။ အရောအနှော၏အစီအစဥ်ကိုသတိထားရပါမည်။
ရာသီဥတုကို ဘယ်လို ခန့်မှန်းနိုင်မလဲ။
လေထုအပူချိန်နှင့် လေထုဖိအားပြောင်းလဲမှုများသည် အရောအနှော၏ပျော်ဝင်နိုင်စွမ်းကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်ပြီး အရည်၏အသွင်အပြင်ကို ပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ Fitzroy မှ တည်ထောင်ထားသော ပိုကြီးသည် သို့မဟုတ် နည်းပါးသည် သို့မဟုတ် အကြေးခွံများ၊ ပုံဆောင်ခဲများ သို့မဟုတ် အကြောမျှင်ဖွဲ့စည်းပုံများ ရှိနေခြင်း သို့မဟုတ် မရှိခြင်း နောက်နာရီအနည်းငယ်ကြာသည်နှင့်အမျှ အချိန်နှင့်အမျှ ပြောင်းလဲနေသည်။ အညစ်အကြေးကင်းစင်သော အရည်သည် အပြာရောင်ကောင်းကင်နှင့် နေသာသောပတ်ဝန်းကျင်၏ ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပြီး တိမ်စပြုလာပါက တိမ်တိုက်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ မိုးရွာနိုင်သည်။
အရည်တွင် အစက်အပြောက်လေးများ ပေါ်လာပါက မြူမှုန်များ သို့မဟုတ် မြူမှုန်များ နှင်းကျနေချိန်တွင် (ရာသီဥတုကောင်းမွန်သော) တွင် အဖြူ ရောင် အမွေးများကဲ့သို့ အမွေးအမှင်လေးများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ရေခဲများဖြစ်လာနိုင်သည်။ ကြည်လင်သော အရည်အစား တိမ်အရည်များ ပေါ်လာပါက၊ မိုးကြိုးမုန်တိုင်း သို့မဟုတ် မိုးကြိုးမုန်တိုင်း ကြုံတွေ့ရလိမ့်မည်။ ဤဖွဲ့စည်းပုံများ၏ မှန်ကန်သော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည် ရာသီဥတုအခြေအနေကို ၂၄ နာရီမှ ၄၈ နာရီအတွင်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Storm Glass ကို တီထွင်သူ
မုန်တိုင်းဖန်ခွက် တီထွင်သူတွေအပြင်၊ ဖရစ်ဇ်ရွိုင်း မိုးလေဝသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အရေးပါသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ Royal Society မှ ခွင့်ပြုချက်ရထားသည့်အတိုင်း လန်ဒန်သို့ တယ်လီဂရမ်မှတစ်ဆင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးပို့ရန် မိုးလေဝသစခန်း ၂၄ ခု ကွန်ရက်ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ Beagle ၏ဒုတိယမြောက်ခရီးကိုစတင်စဉ် FitzRoy သည်ရရှိနိုင်သောလတ္တီတွဒ်တွက်ချက်မှုများကိုချိန်ညှိရန်အတွက်မရေမတွက်နိုင်သောဘားရိုမီတာများနှင့်နက္ခတ္တဗေဒနာရီ 24 လုံးကိုဝတ်ဆင်ခဲ့သည်။
သူသည် လေထုမျက်နှာစာများနှင့် ၎င်းတို့၏လှုပ်ရှားမှုများကို မြင်ယောင်နိုင်ရန် ရာသီဥတုမြေပုံများကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ တကယ့်ဝါသနာက ရာသီဥတုကို ခန့်မှန်းတာ၊ လူ့အသက်တွေကို ကယ်တင်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် လန်ဒန်သတင်းစာ The Times ၏ အယ်ဒီတာများအား ၎င်းတို့၏ စာပေများတွင် မိုးလေဝသအစီရင်ခံစာများ ထည့်သွင်းရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၈၆၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် သမိုင်း၏ ပထမဆုံး မိုးလေဝသအပိုင်းကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
လေထုပြောင်းလဲမှုကြောင့် အရောအနှော၏အသွင်အပြင်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်၊ ဖန်ခွက်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဒေသန္တရရေတို မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကို ပြုလုပ်နိုင်စေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရာသီဥတုတည်ငြိမ်ပြီး ခြောက်သွေ့ပြီး နေသာနေပါက ဖန်ခွက်သည် အညစ်အကြေးကင်းစင်ပြီး ကြည်လင်နေပုံပေါ်သည်။ တိမ်အသင့်အတင့်ဖြစ်လျှင် တိမ်ထူနိုင်ပြီး မိုးရွာနိုင်သည့် လက္ခဏာဖြစ်သည်။ အရည်အတွင်းတွင် အစက်အပြောက်လေးများရှိနေပါက၊ အမှုန်အမွှား သို့မဟုတ် မြူမှုန်များ ရှိနေနိုင်သည်။
ကြည်လင်သောနေ့တွင်၊ ရေခဲပုံဆောင်ခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသော အဖြူရောင် အမွေးအမှင်များကဲ့သို့ သေးငယ်သော အမွေးများကို စတင်မြင်ရလျှင် ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ ရာသီဥတုက ပိုဆိုးလာပြီး နောက်ဆုံးမှာ နှင်းတွေကျလာမယ်။. အဆုံးတွင်၊ ဤတူညီသောပုံဆောင်ခဲများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုအစား တိမ်ထူသောအရည်များအဖြစ် ပေါ်လာပါက၊ ၎င်းသည် မုန်တိုင်းတစ်ခု၏ ရှင်းလင်းပြတ်သားသော harbinger ဖြစ်သည်- ထို့ကြောင့် Storm Glass ဟူသောအမည်ကို ပေးသည်။
Storm Glass ပြုလုပ်နည်း
Storm Glass တစ်ခုပြုလုပ်ရန်၊ ဆားနှင့် ပရုတ်ကို တိကျစွာချိန်ဆပြီး အရက်နှင့် ရေပမာဏကို တိုင်းတာရပါမည်။ အလေးချိန်ချိန်သည့်အခါ 0.01 G တိကျမှုရှိသော တရုတ်လက်ဝတ်ရတနာစကေးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုထည်ကိုတိုင်းတာရန် ဘွဲ့လွန်ဆလင်ဒါ သို့မဟုတ် တိုင်းတာရေးပြွန်ကို အသုံးပြု၍ သို့မဟုတ် ၎င်း၏သိပ်သည်းဆပေါ်မူတည်၍ အရည်ကို ချိန်ဆနိုင်သည်။
အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော ဘူးထဲသို့ ပရုတ်ကို ချက်ချင်းထည့်နိုင်သည်။ ပစ္စည်းကို အရက်ထည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် တွက်ချက်ထားသော အရက်ပမာဏ၏ 2/3 တွင် အရည်ပျော်နိုင်သည်။ အဖြေကို မုန်တိုင်းဖန်ခွက်ထဲသို့ လွှဲပြောင်းပြီး ကျန်အရက်ဖြင့် ဆေးကြောပါ။ ထို့နောက် ဆားကို ရေတွင်ပျော်စေကာ ရရှိလာသောဆားရည်ကို ပရုတ်ရည်ထဲသို့ထည့်ကာ အညီအမျှမွှေပေးပါ (ဖော့ကိုပိတ်ပြီး ပြန်လှန်နိုင်သည် သို့မဟုတ် အကြိမ်များစွာလှုပ်ခါနိုင်သည်)။ ဖြေရှင်းချက်နှင့်အောက်ခြေကြားတွင် လေဖော့အချို့ရှိသင့်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ ပရုတ်သည် လှုပ်ရှားမှု၏ ပြုပြင်မှုကို ညွှန်ပြသော အဖြူရောင်မိုးရေစက်ပုံစံဖြင့် ပြုတ်ကျလိမ့်မည်။
ထို့နောက် လေပူဖောင်းများ မပေါ်စေရန် အဖုံးတစ်ခုဖြင့် ကိရိယာကို ပိတ်ပါ၊ ဖိအားညီမျှစေရန် ခဏလောက်ဖွင့်ပါ၊ ပိတ်ပြီး sealer ကို လိမ်းကာ အေးသွားသည်အထိ ထုတ်ပါ။ ပြီးသွားသော လေကာမှန်အား အနက်ရောင် နောက်ခံတွင် ဒေါင်လိုက် တပ်ဆင်ထားသင့်ပြီး ပြတင်းပေါက်နှင့် မဝေးသော်လည်း အပူပေးစနစ်နှင့် အခြား အပူပေးကိရိယာများနှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားရှိသင့်သည်။ တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် ပရုတ်အမှုန်အမွှားများ စုပုံလာပြီး သီးခြားပုံဆောင်ခဲများ ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် အန္တရာယ်ရှိသော အကြံပြုချက်များ သို့မဟုတ် ပျက်ကွက်မှုများကို မကြာခဏ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ ၎င်းတို့ထဲမှ အချို့ကို ကျွန်ုပ် စာရင်းပြုစုပါမည်။
မုန်တိုင်းမှန်ကို ရာဘာဆို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ရန် မဖြစ်နိုင်၊ ၎င်းသည် မလွဲမသွေ အရောအနှောကို အဝါရောင်ပြောင်းစေပြီး အချိန်ကြာလေ၊ အရောင်ပိုမိုပြည့်ဝလာမည်ဖြစ်သည်။
ပြီးရင် ကိရိယာကို ပလပ်နဲ့ပိတ်၊ ပူဖောင်းအားလုံးကို မျှောခွင့်ပြုပါ၊ ဖိအားညီမျှစေရန် ခဏလောက်ဖွင့်ပါ၊ ပိတ်ပြီး sealer လိမ်းပါ၊ အအေးခံပါ။
ပြီးသွားသော Storm Glass ကို အနက်ရောင် အနက်ရောင် နောက်ခံတွင် မတ်မတ်အနေအထားဖြင့် ပြတင်းပေါက်နှင့် မဝေးသော်လည်း အပူပေးစနစ်များနှင့် အခြားအပူပေးကိရိယာများနှင့် ဝေးဝေးတွင် ထားရှိသင့်သည်။ တစ်ပတ်ခန့်အကြာတွင် ပရုတ်အမှုန်အမွှားများ စုပုံလာပြီး သီးခြားပုံဆောင်ခဲများ ပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။
အရောအနှောဖြင့် ကွန်တိန်နာကို တံဆိပ်ခတ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။တံဆိပ်ခတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါက၊ ချောဆီမပါဘဲ မြေပြင်မှန်ဆို့ သို့မဟုတ် fluoroplastic / polyethylene ဆို့ကိုသုံးနိုင်သည်၊ အဆို့ပါသည် ကွန်တိန်နာ၏ လုံးဝတင်းကျပ်မှုကို အာမခံရမည်၊ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းကို epoxy resin ဖြင့် ပြုပြင်ရန် အဆင်ပြေသည်၊ ၎င်းကို အသုံးပြုပါ။ ဦးထုပ်၏ထိပ်ရှိ thickening အဆင့်၌။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် Storm Glass နှင့် ၎င်း၏လက္ခဏာများအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » မိုးလေဝသ » ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း » မုန်တိုင်းဖန်